Dowlad dadkeeda marin habaabineysa: FAALLO – Warfaafiye:
Dowlad dadkeeda marin habaabineysa: FAALLO
Sooyaalka taariikhda waxaa markii ugu horeysay lagu arkay Somalia, dowlad marin habaabineysa dadkeeda, qaadaneysa go’aano aan habayaraatee xiriir la laheyn xeerarka dowladda, dastuurka KMG ah, ka danbeynta sharciga, maamul wanaaga iyo hoggaaminta toosan.
Xukuumadda maanta jirta waxay meel ka dhac weyn ku sameysay guud ahaan nidaamkii dowladeed iyo haybada qaranimada ee baarlamaanka iyo shacbiguba ku aamineen.
Wadiiqada xukuumaddu u tix raacday go’aamadeeda xukuumiga ah iyo qaraarada ku saabsan su’aasha C/kariin Qalbi Dhagax ayaa waxay daaha ka rogtay in Jamhuuriyadda Federaalka Somalia looga taliyo Addis Ababa. Dantii Qarankana laga hor mariyay cabsi iyo daneysi shaqsi ah.
Waxay su’aashu ka taagan tahay goormee aan ka weecanay shuruucdeena dowladeed iyo mida caalamiga ah, kuna badalnay arrin sandhig u ah dano shaqsi ah, loona maray in dowladda Ethiopia looga heybadeysto iyadoo aan la tixgelineyn shuruucdeena iyo danaheena dowladeed in loo gacan geliyo shaqsi dhiig iyo dhalashaba Soomaali ah.
C/kariin Qalbi Dhagax waxaa lagu dulmay inuu Soomaali yahay oo kaliya. Qaraarka ay ku saleysay go’aanka dowladda heshiisyadana ay tixraaca ugu dhigtay sababta Qalbi Dhagax loogu gacan geliyay gacmo shisheeye ah, caddow soo jireenna, waxay marakac u tahay in loo bareeray bahdil loo geystay heybadda madaxbannaanida iyo karaamada qaranimada Soomaaliyeed.
Jawaabaha iyo ridul ficliga ay shacbiga iyo hay’addaha sharci dejinta ka muujiyeen ayey hadane xukuumaddu qiyaameysay, si cadna ugu sameysay faragelin lid ku ah kala madaxbannaanida hay’addaha dastuuriga ee federaalka. waxay xaaladu mareysaa iney xukuumadda is-hortaagto doodaha dastuuriga ah ee labada aqal, bannaanbaxyada diidmada ah ee shacbiga iyo inay saxaafadda si toos ah xaqiiqada arrimahaasi ku saabsan si waaci ah usoo bandhigin.
Xaalad xun ayaa u sugnaatay karaamada nidaamkeena dowliga ah, sharuucdeena qarameed iyo haybadda dastuurka KMG ah.
Madaxweynihii iyo ra’iisul wasaarihii waxay ka badan waayeen in xubnaha baarlamaanka ay ula shiraan si qabiil qabiil ah, iyadoo la diidan yahay in si qarameed loo wadatashado. xeerarka federaalka qabiilka ah ayaa lugta haysa dowladnimada iyo madaxbannaanida qaranka Soomaaliyeed. maamul goboleedyo kala duwan ayaa hoos joogaan awoodo shisheeye ee deris ah, dowladda Ethiopia-na waxay ula dhaqmeysaa kuwaasina si la mid ah dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia.
Cabdi Iley waxba lama aha inuu wax u yeeriyo qabqablayaasha maamulada qaarkood, isagoo madalaya dowladdiisa Ethiopia oo uu sida weyn u aaminsan yahay.
Somalia tubta ay ku socoto waa mid qatar ah, hadaan shacbiga ka midoobin difaaca qarankooda.